Akanjo miaro fiarovana → Akanjo miasa • amboradara solosaina P&M
Akanjo miaro dia natao hiantohana ny fiarovana mandritra ny asa. Izy ireo koa dia takiana amin'ny lalàna mifehy ny fahasalamana sy ny fiarovana. Ny fampiasana fitaovana hanaovana fanangonana toy izany dia mitaky lamba manokana noho ny fepetra fampiasan'izy ireo manokana.
Amin'ny fanolorana ny fivarotanay, ho ampahany amin'ny akanjo miaro, afaka mividy ianao saron-tavy fiarovana, fiarovan-doha, akanjo tsy misy asidra (ho an'ny olona miasa miaraka amin'ny akora simika mahery) ary akanjo ho an'ny mpikapa hazo (pataloha sy sarontava).
Noho ny fampiasana fitaovana avo lenta, ny fitafiana miaro dia mahatohitra ny fahasimbana, ny voka-dratsy ateraky ny anton-javatra mifandraika amin'ny asa vita, ary tena mahatohitra ny fanadiovana na fanasana matetika koa. Kit ho fiarovana dia vita amin'ny fitaovana namboarina ho ampiasaina hampiasaina, mba hiantohana ny fiarovana ny mpampiasa. Ny fahafaha-manatsara ny fanitsiana ny akanjo dia manome antoka fa mety amin'ny karazana tarehimarika maro sy ho an'ny olona samy hafa ny halavany.
Akanjo miaro ho fiarovana sy fampiononana ny asa
Ny akanjo vita amin'ny lamba PVC (asidra miaro) dia mahatohitra akora simika. Natao hampiasaina any amin'ny faritra misy atahorana hifandray amin'ny zavatra toy ny asidra, bases ary hydroxides. Ny akanjo miaro atolotra ao amin'ny magazinay dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny EN13688, EN14605. Amin'ny akanjo miaro dia manolotra akanjo vita amin'ny rojo vy (pataloha) koa izahay ho an'ny rojo vy. Ny akanjo misy palitao sy pataloha dia manana antsipiriany marobe momba ny fenitra fiarovana avo indrindra. Ny napetraka dia atolotra ho an'ny mpikapa hazo na mpiady rojo vy - mahafeno ny fepetra takiana amin'ny EN13688 sy EN381-5 (kilasy 2 (pataloha)).
Ny assortment dia misy akanjo miaro tena maoderina vita amin'ny landy mavesatra misy fifangaroana akora syntetika. Ny fahaizan'ny asa amin'ny asa aman-draharaha maro sy ny toetoetran'ny asany dia midika fa ireo maodely arosonay dia mihevitra ireo fepetra takiana ireo, manitsy ny masontsivana amin'ny filan'ny tsirairay ny asa voafantina.
Ny akanjo fiarovana manokana dia vita amin'ny singa marobe izay manamora ny fampiasan'izy ireo. Ho fampiononana, izy ireo dia manana paosy malalaka, zipera hanamorana ny fanaovana pataloha, ary seza nohamafisina mba hiarovana amin'ny singa mekanika, simika ary atmosfera.
Alohan'ny hividiananao ny anay fivarotana Manoro hevitra ny hifandray aminay izahay hanamafisana ny fisian'ny vokatra miaraka amin'ny mpanamboatra anay. Eo am-pelatananao ny mpiasanay raha mila torohevitra momba ny fisafidianana akanjo.
akanjo fiarovana betasarimihetsika miaro ho an'ny akanjoakanjo azo arovanaakanjo fiarovana ara-pitsaboanafonony miaro amin'ny akanjoakanjo fiarovanaakanjo miaroakanjo fiarovana ho an'ny ankizyakanjo fiarovana ho an'ny elektrisianinaakanjo fiarovana ho an'ny dokoteraakanjo miaro ho an'ny vyakanjo fiarovana ho an'ny mpitsabo bibyakanjo fiarovana any an-tranon'ombyakanjo miaro amin'ny famafazanaakanjo miaro husqvarnaakanjo azo arovanaakanjo miaro amin'ny kielceakanjo fiarovana ara-pitsaboanaakanjo fiarovana ho an'ny cacarAkanjo miaro PPEny akanjo fiarovan'ny welderakanjo miaro mpiambinaakanjo fiarovana brigadefampisehoana ny sampana mpamono afo akanjoakanjo fiarovanakitapo fiarovana ho an'ny akanjo
5 / 5 ( 15 vato )